हेर्नुहोस् मंसिर ७ गते आईतबार, तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? - Financial Notices
मंसिर १७,२०७७ / ०६ : १६
हेर्नुहोस् मंसिर ७ गते आईतबार, तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ?
Financial Notices 2077-8-7
आर्थिक राशिफल- ७ गते मंसिर २०७७ (आईतबार)
मेषः धनको प्राप्तिले मन प्रसन्न रहला र काममा भाग्यले साथ दिनेछ।
वृषः पारिवारिक कलह बढ्ला र काममा बाधा आउन सक्नेछ।
मिथुनः यात्राको सम्भावना छ र मन प्रसन्न रहनेछ।
कर्कटः धनको लाभ र मानसम्मान मिल्ने सक्नेछ।
सिंहः व्यवसायमा लाभ होला र धन लाभ हुने सम्भावना छ।
कन्याः स्वास्थ्यमा समस्या आउला र धनको खर्च हुन सक्नेछ ।
तुलाः भाग्यले साथ देला र काममा सफलता मिल्ला।
वृश्चिकः काममा सफलता मिल्नुका साथै जागिरमा पदोन्नति हुन सक्छ।
धनुः आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने र व्यापारबाट पर्याप्त लाभ मिल्न सक्छ।
मकरः शारीरिक कष्टको सम्भावना छ र धनको हानी हुन सक्छ।
कुम्भः सुख, आनन्द र उपहार पाइन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
मीनः धनको आगमन हुने र सुखमा वृद्धि हुने समय छ।
धनको कमी किन भइरहन्छ ? हेर्नुहोस् राशि अनुसारको आर्थिक समस्याबाट छुट्करा मिल्ने पुजा र जप विधि।
मंसिर ७ गतेदेखी १३ गतेसम्मको साप्ताहिक आर्थिक राशिफल
मेष राशिको लागि साताको सुरुमा गरेका कामहरु सफल हुनेछन् । साताको मध्यमा धनको हानी हुन सक्ने र स्वास्थमा समस्या आउनाले काम गर्ने उत्साहको कमी हुन सक्नेछ। साताको अन्त्यतिर आयमा वृद्धि र व्यापार व्यवसायमा पर्याप्त लाभ हुन सक्नेछ।
वृष राशि हुनेहरुको लागि सातामा रोकिएका कामहरु सुचारु हुन सक्नेछ । आकस्मिक धन प्राप्त हुन सक्ने, उपहारहरु प्राप्त हुन सक्ने र कामले गर्दा मानसम्मान मिल्न सक्नेछ। साताको अन्त्यतिर केहि आर्थिक समस्या वा धनको नाश हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
मिथुन राशि हुनेहरुको लागि यो सातामा बिग्रिएको काम बन्न सक्ने, व्यवसायबाट राम्रो लाभ हुन सक्ने, छोटो तर लाभदायक यात्रा हुन सक्ने, नयाँ कामको सुरुवात हुन सक्ने र आम्दानीमा सुधार हुन सक्ने छ ।
कर्कट राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुमा काममा समस्या आउन सक्ने र व्यवसायमा सोचे जस्तो लाभ मिल्न नसक्ने रहेको छ। साताको मध्यमा मानसम्मान बढ्न सक्ने छ भने साताको अन्त्यमा काममा पदोन्नति र व्यावसायीक सफलता मिल्न सक्नेछ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुको समयमा धनको आगमन बढ्न सक्ने र व्यवसायमा उचित लाभ हुन सक्नेछ। साताको मध्यमा व्यवसायमा नोक्सान हुन सक्ने र खर्च पनि बढ्न सक्नेछ । साताको अन्त्यमा लगानीबाट राम्रो प्रतिफल मिल्न सक्ने र फसेको पैसा उठ्न सक्ने समय रहेको छ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुका दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुन सक्ने र नसोचेको ठाउँबाट धन आगमन हुन सक्ने रहेको छ । साताको मध्यमा काममा प्रगति हुन सक्ने र व्यापारमा सोचेको जस्तो प्रगति हुन सक्नेछ। साताको अन्त्यमा आर्थिक हानी हुन सक्ने र नसोचेको ठाउँमा खर्च धेरै हुन सक्नेछ।
तुला राशि हुनेहरुको लागि यो सातामा सामाजिक र व्यवसायीक क्षेत्रबाट मानसम्मान मिल्न सक्ने, रोकिएका कामहरु सुचारु हुन सक्ने, कामप्रति विश्वास बढ्न सक्ने, आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति हुन सक्ने र आम्दानीको नयाँ बाटो मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
वृश्चिक राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुमा खर्च बढ्न सक्ने र व्यवसायमा घाटा हुन सक्नेछ। साताको मध्यमा मानसम्मान बढ्न सक्ने र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुन सक्नेछ। साताको अन्त्यमा कामको क्षेत्र विस्तारको सम्भावना रहेको छ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुवातको समयमा जग्गा जमिन वा सुन चाँदी जोड्न सक्ने समय रहेको छ। साताको मध्यमा आम्दानीमा कमि र खर्च बढ्न सक्ने रहेको छ। साताको अन्त्यमा कामको माध्यमबाट पराक्रम बढ्ने र नयाँ जिम्मेबारी मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
मकर राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुमा सुख, आनन्दको प्राप्ति र उपहार मिल्न सक्नेछ। साताको मध्यको समयमा सन्चित धनको वृद्धि र शेयर कारोबारबाट बिशेष लाभ हुन सक्ने रहेको छ। साताको अन्त्यमा व्यवसायमा घाटा र खर्च बढ्न सक्नेछ ।
कुम्भ राशि हुनेहरुको लागि सातामा काम वा व्यवसायमा प्रगति, सन्चित धनको वृद्धि, धातु सम्बन्धि कारोबारबाट बिशेष लाभ, व्यवसायमा पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुने र आम्दानी बढ्ने समय रहेको छ।
मीन राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुमा व्यापार वा व्यवसायबाट पर्याप्त लाभ हुन सक्नेछ। साताको मध्यको समयमा व्यवसायबाट सफलता मिल्न सक्ने र धनको आगमनमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साताको अन्त्यमा बन्न लागेको काम बिग्रिन सक्ने र अनावश्यक खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ।
हेर्नुहोस् तपाईको मङ्सिर महिनाको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ?
मेष राशी हुनेहरुको लागि मङ्सिर सामान्य रहन सक्ला। सूर्य मेष राशिबाट आठौँ रहने भएकाले खर्च धेरै हुन सक्ने भएकाले खर्चमा ध्यान पुर्याउनु पर्ला। शत्रूहरुले काममा हानी पुर्याउन सक्नेछन् भने बन्न लागेको काम पनि बिग्रिन सक्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ला। स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ला र काममा पनि अलिक धेरै मेहेनत गर्नुपर्नेछ।
वृष राशी हुने हरु को लागि मङ्सिर सामान्य रहला। सूर्य ग्रह तपाईंको राशिबाट सातौँ स्थानमा भ्रमण गर्ने भएकाले पारिवारिक असमझदारी वा विचार नमिल्नाले कुनै कुराको निर्णय लिन कठिन होला। काममा सजिलै सफलता नमिल्ला र व्यवसायमा पनि सानातिना बाधा रोकावट आउन सक्ने भएकाले धेरै ध्यान दिएर काम गर्दा सफलता प्राप्त होला। यात्राबाट पनि खासै राम्रो लाभ नहुन सक्ने भयकाले यात्रा नगर्दा राम्रो होला। गलत निर्णयले मानहानी हुन सक्छ।
मिथुन राशी हुनेहरुको लागि मङ्सिर महिना राम्रो रहला। तपाईंको राशिबाट छैटौँ राशिमा सूर्य ग्रह महिनाभरी रहने भएकाले रोकिएका कामहरु सिद्ध हुन सक्ला। गरेको काम सिद्ध हुनाले सन्तुष्टि र आनन्द मिल्न सक्नेछ। शत्रूमाथि विजय प्राप्त होला। राज्य वा प्रशासनबाट लाभ मिल्नुका साथै मानसम्मान पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
कर्कट राशी हुने हरुको लागि यो मङ्सिर महिना सामान्य रहन सक्ला । यो महिनाभर सूर्य ग्रह तपाईंको राशिबाट पाँचौ राशिमा रहने भएकाले गर्दा धनको हानी हुन सक्ने भएकाले आर्थिक कारोबार गर्दा राम्रो सोचविचार गरेर गर्नुपर्ला। अनावश्यक विवादबाट टाढा रहनुपर्ला। यात्राबाट पनि सामान्य लाभ मात्र मिल्ला। अलिक राम्रो मेहेनत गर्दा काममा सफलता र आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
सिंह राशी हुने हरुको लागि मङ्सिर महिना सामान्य रहन सक्ला । यो महिनाभर सूर्य ग्रह तपाईंको राशिबाट चौथों राशिमा रहने भएकाले जग्गा जमिन सम्बन्धि क्षेत्रमा समस्या वा विवादको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मान प्रतिष्ठाको हानी हुन सक्छ। पारिवारिक झगडा वा विवादमा उल्झिनाले काममा राम्रो सँग समय दिन नसकिन सक्छ। यात्राबाट पनि हानी हुन सक्छ।
कन्या राशी हुने हरु को लागि मङ्सिर महिना राम्रो रहनेछ । सूर्य ग्रह यो महिनाभरि तपाईंको राशिबाट तेस्रो राशिमा रहने भएकाले सुनचाँदी आदि धातुबाट बिशेष लाभ मिल्न सक्ने छ। परिवार र साथीभाईको साथ सहयोगले कामहरु सफल हुने र मन प्रसन्न रहने छ। शत्रूमाथि विजय प्राप्त हुन सक्छ र मानसम्मान प्रतिष्ठा पनि बढ्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदको प्राप्ति हुन सक्छ। विश्वास गरेको व्यक्तिबाट सहि सल्लाह सुझाव मिल्न सक्ने समय रहेको छ।
यो महिनाभरि सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट दोस्रो राशिमा रहने भएकाले गर्दा नराम्रो व्यक्तिको सङ्गत हुन सक्छ वा विश्वास गर्न नहुने व्यक्तिसँग सुझाव लिएर काम गर्नाले हानी होला। व्यापारमा नोक्सानी र धनको हानी हुने सम्भावना रहन्छ। कामको क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु पर्ला । बोलीको कारणले गर्दा बन्न लागेको काम पनि बिग्रिन सक्ने भएकाले बोल्दा ध्यान दिनु होला । आर्थिक क्षेत्र सामान्य रहने छ। लगानी गर्दा विचार गर्नुपर्छ।
वृश्चिक राशी हुने हरु को लागि मङ्सिर महिना मध्यम रहनेछ । सूर्य ग्रहले यो महिनाभरि तपाईंको राशिमा भ्रमण गर्ने भएकाले गर्दा काममा केहि बिलम्ब भएपनि काम सिद्ध होला। खर्चमा ध्यान दिदा आर्थिक क्षेत्रमा पनि सामान्य नै रहला। बिना कारणको यात्रा र व्यर्थमा चिन्ता नलिंदा यो महिना राम्रो नै रहला।
धनु राशी हुने हरु को लागि मङ्सिर महिना मध्यम रहला। सूर्य ग्रह यो महिनाभरि तपाईंको राशिबाट बाह्रौ राशिमा रहने भएकाले खर्च अत्याधिक हुनाले आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्ला। आर्थिक क्षेत्र तेती सबल नहोला । खर्च बढ्ने छ । कडा मेहेनेत ले मात्र सफलता मिल्ने छ । महिना को अन्तिम मा मेहेनत गर्दा काममा सफलता मिल्नेछ । बैदेशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने छ।
मकर राशी को लागि मङ्सिर महिना राम्रो छ । सूर्य ग्रह यो महिनाभरि तपाईंको राशिबाट एघारौँ राशिमा भ्रमण गर्ने भएकाले गर्दा व्यापार मा मनग्य लाभ हुने छ। आर्थिक उपार्जनको नयाँ बाटो मिल्न सक्ने छ र नयाँ कामको थालनी हुन सक्नेछ। राम्रो लगानीको वातावरण मिल्न सक्छ। परिवारबाट राम्रो सहयोग हुन सक्छ। काममा पदोन्नति हुन सक्ने समय छ।
कुम्भ राशी को लागि मङ्सिर महिना राम्रो रहन सक्ला। ठूला पदका व्यक्तिहरु सँग सम्पर्क बढ्नाले विभिन्न काममा सहयोग मिल्ला। नयाँ काम सुरु गर्न चाहनेले काम सुरुवात गर्न सक्ला भने गरिरहेको काममा पनि नयाँ जिम्मेवारी र पदोन्नति प्राप्त होला। सज्जन व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त होला। रोकिएका आर्थिक कारोबार मिल्नाले धन आगमन बढ्न सक्ला।
मीन राशी को लागि यो महिना सामान्य रहनेछ। सूर्य ग्रह यो महिनाभरि तपाईंको राशिबाट नवौँ राशिमा भ्रमण गर्ने भएकाले गर्दा मानसम्मानको हानी, विना कारण अरुको विवादमा फस्न सकिने, धनको हानी हुन सक्ने, आम्दानी कमजोर रहने र साथीभाई वा आफन्तबाट चाहेको सहयोग मिल्न नसक्ने ।